ဗလာ ငါးတန် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Arts & Humanities » ဗလာ ငါးတန်	28
Posted by Thint Aye Yeik on Apr 20, 2015 in Arts & Humanities, Creative Writing, History, My Dear Diary, Short Story | 28 comments
သုံည ဗလစွမ်းအားရှင်တယောက် အကြောင်း
ဗလငါးတန်ကို တစ်တန်ချင်းစီ စစ်ဆေးတိုင်းထွာတတ်သော အကြီးအကဲများနှင့် ကိုယ်ကြုံနေရသည်။
ပထမ ဗလတစ်တန်ကို စစ်ဆေးသူက ကိုယ့်ကို မေးသည်။
”ဟေ့ မောင်ရင် မင့်ဆီမှာ
စာရိတ္တဗလ ရှိသလား ”
ကိုယ့်ထံမှ အဖြေက. . .
ဒုတိယဗလ နောက်တစ်တန်စစ်ဆေးသူက. . .
”ဟေ့ သူငယ်. . မင်းဆီမှာ ဘောဂဗလ ရှိလားကွဲ့”
ကိုယ့်ထံမှ အဖြေကတော့ . . .
တတိယဗလ တစ်တန်ကို တစ်ယောက်က စစ်ဆေးပြန်သည်။
”ဟေ့. . . မင့်မှာ မိတ္တဗလ ရှိသလား”
ထို့နောက် . . . စတုတ္ထဗလကို မေးသူနှင့် တွေ့ရပြန်သည်။
”မောင်ရင်လေးမှာ ဥာဏဗလဆိုတာ ရှိသလားဟဲ့”
ကိုယ့်ဆီမှ အဖြေစကားကတော့ ထုံးစံတကာ့ထုံးစံအတိုင်း. . .
အဲ့သည်နောက်မှာ ပဉ္စမ ဗလတစ်တန်ကို အမေးခံရပြန်သည်။
”မောင်မင်းမှာ ကာယဗလရော ပြည့်စုံရဲ့လားဟဲ့”
မလွဲမသွေ ကိုယ်ပြန်ဖြေရတာက. . .
စစ်ဆေးမှုတွေအပြီးမှာ ကိုယ့်အတွက် ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာ ဂုဏ်ထူး ဘွဲ့ထူးကြီး ရလိုက်သည်။
”သုညဗလရှင်” ဆိုသော ဘွဲ့ထူးဂုဏ်ထူးကြီး ရလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ကိုယ့်အိမ်နံရံပေါ်မှာ စာသားတချို့ ရေးခြစ်လိုက်သည်။
ဗလငါးတန် ပိုင်စိုးနိုင်သူထက် အင်အားကြီးပါသော ”ဗလာငါးတန်” ပိုင်စိုးသူ ဖြစ်ပေတော့သတည်း”
Mr. MarGa says: ပေါင်းခြင်း သုည
Alinn Z says: ဗလာရဲ့ စွမ်းအားနော်
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .အလက်ဇင်း ပြန်ရောက်လာလို့ တော်သေး။ ရွာကြီးက ပျင်းစရာကြီးဖြစ်နေတာ။
Alinn Z says: တိန်။
အနော် ခရီးထွက်တာ ဒီတခေါက် နည်းနည်း ရက်ရှည်သွားတယ်
ဒါမယ့် ရွာထဲ ပုံမှန်ပါပဲ။
ခင်ဇော် says: ရွာမှာ အမြဲ အက်တစ်ဖြစ်နေတဲ့ ကလေးကို မြင်ရတာ
ကူညီချင်တဲ့ ကလေးရှိတာ မင်္ဂလာတစ်ပါးလို့ မှတ်ယူပါတယ်ကွယ်။
Alinn Z says: ရွာမှာ အမြဲ ရှိဆို
တချိန်ကျရင် ကျနော်က သဂျီးလုပ်မှာလေ
တကယ်တော့ ရွာကို မဝင်တော့ပါဘူးလို့ တခါတွေးမိရင်
အခါတစ်သောင်းလောက် ထပ်ထပ် ဝင်မိနေတာ
သဂျီးများ ချစ်စနိုးနဲ့ ကျိန်စာတိုက်ထားသလားမသိ
(အမှန်က ကိုယ့် သံယောဇဉ်ကြိုးကို ကိုယ် မဖြတ်နိုင်တာ)
Ma Ma says: ကိုယ်တွက်ကြည့်တာတော့ ………
အနည်းဆုံးးး စာရိတ္တဗလ၊ မိတ္တဗလ နဲ့ ဥာဏဗလ ဗလ ၃တန်လောက်တော့ ရှိပါသေးတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12177
Alinn Z says: အန်တီမမကတော့
ဗလ ငါးတန်လုံး အပြည့်အဝ ရှိနေတဲ့သူလို့
မြစပဲရိုး says: ဟေ့ သူငယ်လေး
သုည နဲ့ ဗလာ တကယ်တော့ တူမယ်မထင်။
၁ နောက်မှာ ဗလာ ဖြစ်ရင် ၁ ဘဲ ဖြစ်ပေမဲ့
၁ နောက်မှာ သုည တိုးတိုင်း ၁ က တန်ဖိုးကြီးရော။
တစ်ခု ဘဲ ပြောကွယ်။ သုည လား ဗလာ လား။
ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ဗာလနံ မဖြစ်ပြီးရော ကွယ်။
ချစ်မမ ပြောသလို အဲဒီ ၃ တန် က မင်း ရဲ့ လက်ထဲ မှာ ဘဲ ရှိပါတယ်။
အမြဲ တည်နေအောင် ကြိုးစားပေါ့။
ကျန် ၂ တန် ကတော့ ကံ ကို သာ ပုံထားလိုက်။
စားတိုင်း ဝ တာ မဟုတ်တာ က သက်သေဘဲ ဟုတ်။ မှတ်ချက် – ရွာ အဝင် ၃ + ၂ နဲ့ စာမေးပွဲ စစ် နေပါတော့လား။
Alinn Z says: အရီး
သုညနဲ့ ဗလာ အတူတူပဲလို့ အဓိပ္ပာယ်ယူပြီး ဒီစာမူလေးထဲ ထည့်ရေးလိုက်တာရယ်ပါ
သုည လုပ်မလား ဗလာ လုပ်မလားဆိုရင် ဒီစာမူထဲမှာ ဗလာပဲ ထည့်မယ်
ဒါနဲ့ ရွာအဝင်မှာ ဂဏန်ပေါင်းတွေ ကျွေးနေတာလား
ဟိုတပါတ်လောက်ကလည်း ကိုတောပျော်ကြီးကို ရွာအဝင်မှာ ဂဏန်းပေါင်းတွေ ကျွေးလို့တဲ့
ကြည့်ရတာ သဂျီးက လူရွေးပြီးများ ဂဏန်းပေါင်းတွေ ကျွေးနေလေသလားးးး
kai says: ဟင်..။
စာမေးပွဲစစ်နေပြန်ပြီလား…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12177
Alinn Z says: စစ်တယ် စစ်တယ်…
.ပြီးခဲ့တဲ့တပါတ်လောက်က ကိုတောတွင်းပျော်က .. ကျနော့်ကို လာတိုင်ပင်တယ်။
ရွာအဝင်မှာ သူ့ကို Prove your humanity :3+ 8 = ဆိုပြီး စစ်နေလို့တဲ့…
ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ…တဲ့ ။
အီပုပ်ဂိုလေးကလည်း… ဘာမသိ ညာမသိနဲ့ … 11 လို့ ဖြည့်လိုက်ပေါ့လို့ အကြံပေးလိုက်တယ်..
ပလို့ ဂျိ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 997
kotun winlatt says: အင်းးးး အတိတ်စိမ်းတွေပေးနေတာများလား ဗလငါးတန် ဗလာငါးတန် ဗ က ၄ လကလည်း ၄ အပီပဲဟေ့ ဒီအပတ် ၄၄၅ ခိခိ
အဲ့လိုချဲတို့ နှစ်လုံးထီတို့ ကျနော် ထိုးလည်း မထိုး..
သူများ ထိုးလည်း အားမပေး…
.ပေါက်နိုင်ချေ ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ ဆယ်ကွက် ကိုယ်ကထိုးရင် ကျန်တဲ့ အကွက် ကိုးဆယ်ထဲကနေ
ကိုယ့်ဆီက ပါသွားဖို့က ရာခိုင်နှုန်းမတရား များနေတာ…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 565
lu lu says: သုည မဟုတ်တဲ့ ဗလာ ပေါ့
Alinn Z says: ဗလာငါးတန် ပိုင်ရှင်ကွ…
(အေးသာယာဝိုင် မသောက်ခင် မူးနေပြီ)
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ဆရာကြီး မင်းသုဝဏ်ကတော့ လီယာမင်းကြီးမှာ ပြန်ခဲ့တာ။ နတ္ထိ ပါ အရှင် တဲ့။
Alinn Z says: ကျနော့် ဆရာတာရာမင်းဝေကတော့ ….
သုညဆိုတာ တကယ်သုည စစ်သွားရင်… ပြစရာ သင်္ကေတ “0” ဆိုတာတောင် မရှိတော့ဘူး…တဲ့…
ပြစရာ သုည အက္ခရာ (သင်္ကေတလေး) ရှိနေသေးရင်…အဲဒါ… သုည မစစ်သေးဘူးဆိုပဲ… ဖျားတယ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: အေးအေး……..အာ့ပဲကောင်းတယ်။
Alinn Z says: Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
Mike says: .ရောမတွေ သုည ကိုမသိခဲ့လို့ သချာင်္မှာဒုက္ခရောက်ခဲ့သတဲ့….
.သုည ကို အိန္ဒိယ ကစတွေ့တာဆိုပဲ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12177
Alinn Z says: စာဖတ်အားကောင်းတဲ့ ဦးမိုက်
လာရောက်ဖတ်ရှုပြီး comment လေး ပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်း ဇူးဇူး
Ma Ei says: ”ဗလာငါးတန်” ပိုင်စိုးသူရေ…
ခရီးသွားပို့စ်လေး ဓာတ်ပုံလေးတွေ မျှော်နေတာနော်…
Alinn Z says: တင်မယ်ဗျ။ တစ်ပုဒ်တော့ အဆင်သင့် ရေးပြီး ချွတ်ပြီးပြီ
manawphyulay says: မောင်သုညရေ…. အဲ မောင်သူရ
Alinn Z says: ကျူးဇေးပါ အဲလေ ကျေးဇူးပါ မောမောမန မမ မနော ရေ
မွသဲ ( 17082011 ) says: ဆက်ပန်ထုံကလေးက ဗလာငါးတန်ရှိရင်ရပါဘီကွယ်။ ယောက်ကျားဗလာ ရည်းစားဗလာ စပွန်ဆာဗလာ အဲ့အဲ့အဲ့ ပြေးဘီ ဟိဟိ